Phupha ngePhakheji Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iipakeji zihlala ziyinto esivuyisayo. Inokuba siye sa-odola into kwaye silindele ngolangazelelo ukufumana urhwebo. Nangona kunjalo, kubangcono nangakumbi xa umntu othile esithumela ngokungalindelekanga iphakheji, kuba oku kubonisa ukuba omnye ucinga ngathi kwaye ufuna ukusonwabisa. Iphakheji esongelwe kakuhle yosuku lokuzalwa okanye njengesipho IKrismesi kukwaqhele ukwenza namehlo omamkeli akhanye.
Nangona kunjalo, iiphakheji azibangeli kuphela ukuba sonwabe, kodwa oku kunokusebenza ukuba siphupha ukufumana enye.
Iphakheji inokubonakala njengophawu lokuphupha ukuba siyithumela ngokwethu. Athetha ntoni loo maphupha?
1 Uphawu lwephupha «iphakheji» - ukutolikwa ngokubanzi
2 "Iphakheji" yesimboli yephupha - ukutolika kwengqondo
3 "Iphakheji" yesimboli yephupha-ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iphakheji» - ukutolikwa ngokubanzi
Nabani na ophupha ngokufumana iphakheji unokuhlala eyithanda uphawu oluqinisekileyo qonda. Ibonisa amashishini aphumeleleyo kwaye enengeniso. Mhlawumbi uthatha uhambo njengenxalenye yabo. Ukuba iphakheji ethunyelwe ephupheni inkulu kakhulu kwaye inzima, abo bachaphazelekayo banokulindela ukuba kube mnandi iingcongconi kunye namaxesha amaninzi okonwaba.
Umthumeli kufuneka asoloko ethathelwa ingqalelo: iphakheji oyifumana kumhlobo olungileyo uthembisa ukukubona kwakhona kungekudala kunye nokwazi iindaba ezininzi. Oku kuyasebenza ukuba, ngokuchaseneyo, umntu ekubhekiswa kuye uthumela iphakheji komnye umntu ephupheni.
Nangona kunjalo, isimboli itolikwa kancinci ukuba yiphakheji engenanto efunyanwa ephupheni. Oku kwazisa Ukuphoxeka kunye neengxaki. Iphupha linokuhambelana ikakhulu nenqanaba lobungcali: iiprojekthi ezicwangcisiweyo aziyi kuphumelela apha, ukusilela kunye nezivumelwano ezimbi zisongelwe.
En imisebenzi enzima Kwaye, ngokoluvo ngokubanzi, umntu kufuneka asilele ukuba uphupha ngokuza nepakethe enzima kakhulu eposini okanye ayilahle endleleni.
"Iphakheji" yesimboli yephupha - ukutolika kwengqondo
Kwingcaciso yengqondo yephupha, ukuthumela iphakheji ephupheni izakhono zentlalo lomntu ochaphazelekayo. Ungumhlobo olungileyo woontanga bakhe, uyabaxhasa kwaye uhlala ebanika imvakalelo yokuba lapho, yendlebe evulekileyo. Ngokunokwenzeka umamkeli wepakeji ikwangumntu lowo umphuphi angathanda ukunika intliziyo yakhe kuye.
Ukuba umntu ochaphazelekayo ngulowo ufumana iphakheji ephupheni, oku kumele, ngokuka-psychoanalysts, i-subconscious Iimvakalelo, amava y Zakhono Le miba yobuqu ayikadityaniswa ngokwaneleyo kubomi bemihla ngemihla, kwaye mhlawumbi amanye amathuba nawo akasetyenziswanga.
Kwakhona, amanye amava asafuna ukuqhutywa. Isimboli inokukucela ukuba ungaphindi ucinezele amava, kodwa ujongane nokuvela. Oku kunokuba ngokwesondo ngokwendalo. Ngaba iphupha uziva ukuba isini sakho sinetyala? Okanye ngaba unazo iimfuno ezingakhange zifezekiswe ukuza kuthi ga ngoku?
"Iphakheji" yesimboli yephupha-ukutolika kokomoya
Ngokwendlela yokomoya, iphakheji ifuzisela eyakho ezinokwenzeka. Umntu ekuthethwa ngaye ukwinkqubo yokufumanisa izakhono zakhe kunye nokufunda ukuzisebenzisela yena.